Faah-faahin Qarax ka dhacay Muqdisho | Keydmedia
Ugu yaraan labo ruux oo shacab ahaa ayaa ku geeriyooday qaraxa oo ka dhacay nawaaxiga garoonka Eng Yariisow (Ex Koonis).
MUQDISHO, Soomaaliya - Guuddoomiyaha degmada Yaaqshiid Muuse Geesey Jimcaale ayaa ka bad baaday qarax nooca Miinada ah oo lagula eegtay nawaaxiga garoonka Eng Yariisow (Ex Koonis) oo ku yaalla degmada Cabdicasiis.
Guddoomiyaha iyo saraalkiil kale oo la socday ayaa ka soo baxay garoonka, oo la filayo in ay galabta cayaar saaxiibtinimo ah ku dhex marto kooxo ka kala socdo degmooyinka Yaaqshiid iyo Cabdicasiis.
Ugu yaraan labo ruux oo shacab ahaa ayaa qaraxa ku geeriyooday sida uu goob jooge Keydmedia Online u xaqiijiyay, labada ruux ee geeriyootay ayaa kala ahaa wade Mooto Bajaaj iyo haweeney Mootada saarneed.
Ciidamada amaamka ayaa qaraxa ka dib goobta soo gaaray, iyagoona daqiiqado kooban wadda xiray, waxaana goobta laga jiiday gaariga guddoomiya oo bur bur xooggan ka soo gaaray qaraxa lala eegtay.
Magaalada Muqdisho waxaa maalmihii dambe ku soo badanayay oo sidii tusbax furtay noqday qaraxyada Miinada ah ee lala beegsanayo masuuliyiinta Dowladda iyo weerarada tooska ah ee lagu qaadayo Hoteelada iyo gooba kale.